အသက် (၂၃) နှစ် - ကျွန်ုပ်၏နှောင့်နှေးနေသောသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းကို ၄၁ ရက်အကြာတွင်ကုသခဲ့သည်။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
အသက် (၂၃) နှစ် - ကျွန်ုပ်၏နှောင့်နှေးနေသောသုတ်ရည်လွှတ်မှုကို ၄၁ ရက်အပြီးတွင်ကုသခဲ့သည်
DE ရှိသည်သောယောက်ျားများအားလုံးအတွက်ဖြစ်သည်၊ သင်ပိုကောင်းနိုင်သည်။ ငါ ၂၃ နှစ်ရှိပြီ၊ ဒါကိုငါကုသနိုင်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူး။ ငါလိင်ဆက်ဆံကတည်းကငါမိန်းမနှင့်အော်ဂဇင်မရခဲ့ပါ။ ငါ့ရည်းစားကငါ့ကိုကြာရှည်ခံတဲ့ handjob ပေးရင်ငါအဲဒါကိုအောင်မြင်နိုင်မှာပါ
ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်“ သေခြင်းတရား” တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (လုံးဝကျက်စားတတ်သည့်ကလေးငယ်တစ် ဦး အနေဖြင့်ပိုမိုဆိုးရွားလာစေရန်) မှလုံးဝထုံထိုင်းခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံစဉ်၊
ငါ NoFap တွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်ကျွန်မမှန်မှန်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖြတ်စတင်ခဲ့ပြီး, ကယ့်ကိုခက်ခဲခဲ့ပါတယ်နဲ့ကျွန်မအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်ရောက်သွားတယ်သော်လည်းငါ့ sensitivity ကိုပြန်လာပြီးမှစတင်ခဲ့သည်။ ငါများသောအားဖြင့်ကျွန်မ9ရက်ပေါင်းရောက်ရှိငါသည်ဤသွားကြဖို့လမ်းကိုခဲ့ပါတယ်သဘောပေါက်ကြောင်း 10 မိနစ်အတွက် blowjob မှ လာ. တိုင်အောင် wasent, နေ့ 15 သို့မဟုတ်2မှာပြန်ရောက်သွားတယ်။
ငါ 23 ရက်ပတ်လုံးပြုဆဲ DE တယ်, ဒါကြောင့်ငါ relapsing ထားရှိမည်။ သင်ဤလုပျနိုငျတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းသင်အမှန်တကယ်ပိုကောင်းရချင်တယ်ဆိုရင်, ဒီနှင့်အတူစိတ်တွင်ငါတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်လိင်မပါဘဲ 40 ရက်ပေါင်းသွားလေ၏ဖြစ်ပါတယ်။ ငါ Edge ဘူး (althought ငါအားနည်းခြင်းသို့မဟုတ်ပျင်း၏အချိန်လေးအတွင်းညစ်ညမ်း watched) နှင့်ကြောင်းမရှိမဖြစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါလိင်ခဲ့ 41 နေ့ရက်တွင်, ငါတကယ်ဦးနှောက်အာရုံကြောကြီးနဲ့ကျွန်မအော်ဂဇင်မှငါ့ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာယူပေမယ့်ကျွန်မရဲ့နောက်ကျောတင်ခြင်းနှင့်ငါ့ခြေချောင်း streching ကြောင့်အမှုကိုပြု၏။
သာသနာပြုလုပ်နေစဉ်တွင်, နေ့ 48 တွင်တဖန်ငါကြိုးစားခဲ့နှင့်2မိနစ်သို့ရောက်ကြ၏။ ငါပျောက်ကင်းအောင်ကုသခံခဲ့ရသည်! ငါကျနော်တို့မှာအများကြီးခံစားခဲ့ရနှင့်အကြိမ်စိတ်ပျက်ရာပေါင်းများစွာတယ်, ငါသည်ဤဖယ်ရှားပစ်ရလိမ့်မယ်ထင်ခဲ့ပေ။ ယခုတွင်ငါသည်ပုံမှန်လူတစ်ဦးနဲ့တူလိင်ပျော်မွေ့နိုင်ပါ။ ငါပိုကောင်းရနိုင်, ငါ့အခွအေနေအပူတပြင်းခဲ့, ဒါကြောင့်သင်သည်တတ်နိုင်လျှင်!
LINK - 41 ရက်အကြာမှာငါ၏အနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ !!!